चितवनमा ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि कसले गर्यो आ’क्र’म’ण ? भयो यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा
चितवन । भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताका रुपमा देखिएका ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आ’क्र’म’ण। चितवनमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा गएका शाहीमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताहरुले शाहीमाथि नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट गरेका हुन । शाही ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानमा सक्रिए छन । उनले पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न तहमा भएका भ्रष्टाचार र बेरुजुहरुको भण्डाफोर गर्दै आएका छन् । यही क्रममा उक्त अभियानले चितवनको चौबिसकोटीमा खबरदारी सभा आयोजना गरेको थियो । नेपालका लागि नेपाली अभियानले आयोजना गरेको उक्त खबरदारी सभालाई नेकपाका कार्यकर्ताहरुले विथोलेका छन् । कार्यक्रम विथोल्ने कार्यमा नेकपा समर्थित विद्यार्थीहरुको ठूलो सहमूह सहभागी भएको थियो ।…
अमेरिकामा सडक दुर्घटनामा परी एक नेपाली विद्यार्थीको मृ*त्यु
काठमाडौं– अमेरिकाको लुजियाना स्टेट युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत एक नेपाली विद्यार्थीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । सिन्धुपाल्चोक घर भएका २६ वर्षीय विनोद नेपालको उपचारको क्रममा गत बिहीबार मृत्यु भएको हो । सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका उनलाई आफ्नो घर जाने क्रममा गत सोमबार सवारी साधनले ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते उनलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएकोमा बिहीबार मृत्यु भएको हो । उनको दाह संस्कारका लागि खर्च अभाव हुँदा ‘गो फण्ड’ खोलिएको छ । लुजियाना युनिभर्सिटीका नेपाली विद्यार्थी संघका सभापति राजन ढकालले संघको तर्फबाट ‘गो फन्ड’ खोलेका छन् ।
अमेरिकाले दियो नेपाललाई यस्तो सुझाव
काठमाण्डु,११असोज–अमेरिकाले नेपाललाई कुनै मुलुकका पक्षमा नलागी ‘नेपालकै पक्षमा रहेको’ हेर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ ।‘नेपाल आफ्नो नीतिमा अडिग हुनुपर्छ, कसैको पक्ष विपक्षमा लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ अमेरिकी राजदूत ¥यान्डीले भने,‘यो भन्दा बढी हामीले सार्वभौम मुलुकलाई केही भन्न सक्दैनौं ।’बेरीले शुक्रबार राजधानीमा कूटनीतिज्ञ, विज्ञ, संवाद, उद्यमी र सञ्चारकर्ममाझ भने,‘हामी नेपालको पुरानो मित्र हौं । नेपाल कसैको पक्षमा नभई नेपालकै पक्षमा रहेको हेर्न चाहन्छौं ।नेपालमा कतिपय विषयमा गलत बुझाइ छ । हामी यस्ता विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति आइपीएस कुनै रणनीति नभई यो क्षेत्रका लागि अमेरिकी…
प्रचण्ड आफैले गरे एकाएक राजनीतिबाट सन्यास लिने दिनको घोषणा
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपालाई देशको एक मात्र पार्टी बनाएर राजनीतिबाट सन्यास लिने बताएका छन् । पार्टी एक भएपछि आफ्नो आबश्यकता महसुस नहुने र मुलधारको राजनीतिबाट सन्यास लिने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो । उनले पार्टीलाई एक वर्षभित्र सम्पूर्ण जनताको एकमात्र पार्टी बनाउने र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एकमात्र पार्टी हुने गरी छिट्टै अभियान सुरु गर्ने बताए । ‘अब केन्द्रीय समिति बैठक बसेर एउटै मन एउटै संकल्प बनाएर जनतामा जान्छौं । जनतामा गइसकेपछि…
काठमाडौं- आज असोज ११ गते शनिबारबाट सोह्र श्राद्ध अन्तर्गतको पितृपक्ष सकिदैछ । पूर्णिमाबाट शुरू भएको पितृपक्ष औंशीको दिन सकिन्छ । तर यस पटकको सोह्र श्राद्ध अन्य समयको भन्दा निकै फरक तथा बिषेश संयोग युक्त छ । ११ गते परेको शनिबार र औंशीको संयोग निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस पटकको सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन २०५६ साल यताको सबैभन्दा धनयोगको संयोग बनेको छ । उक्त दिन पवित्र मनले निम्न विधि पूर्वक दिवंगत पितृको बिदाई गरे धनलाभ हुनेछ । १. पिपलको पूजा सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन पिपलको पत्तामा पाच प्रकारका मिठाई राखेर पिपलको…
काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी कार्यालय सानेपा आउँदा नेपाल तरुण दलकाअध्यक्ष जितजंग बस्नेतलाई कारबाहीको माग गर्दै महासचिव भुपेन्द्रजंग शाही समूहले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । तरण दलका महासचिव शाही समूहले शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा प्रदर्शन गरेको हो । नीहरुले तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गर्नुका साथै नाराबाजी गरेका छन् । प्रर्दशनलगत्तै सभापति देउवालाई भेटेर महासचिव शाहीले ज्ञापन पत्र बुझाए। अध्यक्ष बस्नेत र महासचिव शाहीले एकअर्कालाई कारबाही गरेपछि तरूण दलभित्र बिबाद सिर्जना भएको छ। काँग्रेसले आजै दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक ३ बजेसम्म…
एक महिला, जसलाई केपी ओलीले यसरी ढाँटे
काठमाडौं–‘कालीचरण कोठामा आउँछन् भनेर साथी केआर खम्बूले भन्नुहुन्थ्यो। को रहेछन् यी कालीचरण ? मनमा जिज्ञासा थियो,’ डा. जंग चौहानले विगत सम्झिए ‘कालीचरण भनेका त झापा आन्दोलनका केपी ओली रहेछन्।’ दर्शकदीर्घाबाट पररर ताली बज्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सहपाठी केआर खम्बूद्वारा लिखित छायाँको लस्कर पुस्तकको बिहीबार लोकार्पण भयो। उक्त कार्यक्रममा ओलीको राजनीतिक संघर्ष र जीवन भोगाइ उल्लेख गरे, डा. चौहानले। ‘एकपटक त केपी ओली कोठामा पुग्दा हन्हनी ज्वरो आएको थियो,’ डा. चौहानले भने, ‘सिटामोल किन्ने पैसा पनि थिएन उहाँसँग।’ कम्युनिस्ट पार्टीको झापा आन्दोलनका क्रममा ओलीसहित नेताका संघर्षका कथा, ओलीले लेखेका त्यतिबेलाका गीत÷कविता…